Ring: Solon'ny Skype amin'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Linux PostInstall | | fampiharana, GNU / Linux
Araka ny filazan'ny mpamorona azy manokana (Savoir - Faire Linux), Ring es una sehatry ny fifandraisana feo azo antoka ary nozaraina, horonan-tsary and chat tsy mila an'izany mpizara afovoany ary avelao ny hery ny fiainana manokana ao Las tanànan'ny mpampiasa.
Ring es un rindrambaiko kaody misokatra ho an'ny serasera izay mamela ny manao antso ny mpampiasa audio na video ary mandefa Lahatsoratra amin'ny fomba azo antoka ary afaka, tsiambaratelo. Mety hifandray amin'ny serivisy telefaona mahazatra na miaraka amin'ny misy fitaovana telephone mifandray. F tena fmora ampiasaina, manome a fitambaran'ny teknolojia ary fanavaozana misokatra amin'ny ny karazana rehetra fanantenana avy amin'ny an'ny mpampiasa azy sy ny mpamorona. Ary ny maha- rindrambaiko kaody misokatra manome ny fahafaha-manamarina izany tsy izany ny rindrambaiko iray fanaraha-maso ho an'ny mpampiasa, fa ny mifamadika amin'izany.
Tsy natao ho tsinontsinona ny teny filamatr'izy ireo: Miaraka amin'ny peratra, mifehy ny fifandraisanao!
Anisan'ireo tombony manokana azony ampisongadinana:
Ny tsiambarateloo: Tsy misy mombamomba anao dia tehirizina amin'ny mpizara afovoany. Izany no izy tsy azo foronina firaketana an-tsoratra amin'ireo mpampiasa izay ampandehanana na apetraka azy. anarana y el fanajana ny fiainana manokana dia azo antoka mialoha.
Ny fiarovana anao: Edia omen'ny fomba enkripsi y ny fampiasana mari-pankasitrahana. Audio, horonan-tsary sy lahatsoratra mivadika ho hafatra voahidy izay mpandray ihany afaka mamaha.
Ny fahalalahanao: Es rindrambaiko kaody misokatra ambany fahazoan-dàlana GPL v3. Afaka mampiasa ny mpampiasa anao tsirairay avy manamarina ny Laharana sy tanjona ary ampidiro ao vaovao ho an'ny manatsara ny fahombiazan'ny rindrambaiko. Manome antoka izany mangarahara ary ny fahalalahana ho an'ny rehetra!
Ring dia fitambaran'ny haitao sy ny fanavaozana toy ny:
Fifanarahana mpampiasa marobe: GNU / Linux (eo ambanin'ny Gnome), MS Windows, Mac OS X ary Android.
Ny tranombokinao voasoratra ao amin'ny QtCore, manamora portability an'ny mpanjifa eo anelanelan'ny rafitra fiasa samihafa.
Ny fomba fanodinana anatiny fampiasana ha D-fiara fitateram-bahoaka. Permfifandraisana amin'ny Internet ny fivarotam-boky LibRingClient y LibRing, ho an'ny mpanjifa fotsiny GNU / Linux.
Ny votoatin'ny fampiharana (LibRing) tsy mifanerasera miaraka amin'ireo mpampiasa fa izany tokoa fonosina tsirairay fiasan'ny fampiharana mihitsy.
Ireo singa rehetra ireo Anisan'izany tranomboky ivelany fa mitondra fiara izy ireo teknolojia na protokol misokatra ary manam-pahaizana.
Ring dia miankina amin'ny efatra tranomboky ivelany, aiza tsirairay amin'izy ireo manao asa voafaritra tsara. izy ireo dia:
OpenDHT: Fiantohana Comunicaciones Descentralized.
Hatramin'ny gmanome antoka ny tsiambaratelo ny fifandraisana no tanjona tena ilaina amin'ny peratra. Ary eSta es ny antony naorina izy io rafitra iray tsy misy mpizara afovoany, miankina amin'ny serasera mitovy mitovy (peer to peer). Con maodely aiza tahirin-kevitra mitsikera tsy tehirizina amin'ny toerana iray tokana fa de dia mivelatra amin'ireo mpampiasa maro.
Hahita datum (fampahalalana) ao maritrano handinika-manaraka, mila mahay manao fikarohana mora, ianareoSte dia ny anjara asan'ny la Trano famakiam-boky (fahazoan-dàlana maimaim-poana) miankina amin'ny OpenDHT lasa avy amin'ny mpamolavola ny ekipa (Savoir - Faire Linux). Evoasoratra anaty C++ he aingam-panahy tao DHT (nozaraina Latabatra Hash) izany Nihaona feno ny fepetra takiana amin'ny Ring. toy ny mampiasa iray fotsiny Latabatra hash fototra hita ny adiresy IP an'ny mpampiasa iray. ihany koa, fivarotam-boky hoy mamela ny fidirana amin'ny ny hafa datasà maivana. Ohatra, OpenDHT afaka mpiara-miasa lakilem-bahoaka miaraka amin'ny peratra fanamarihana mba encrypt ny Lahatsoratra.
PJSIP: Mamela fifandraisana amin'i telefaona nentim-paharazana.
To be hanao inona Ring azon'ny be antitra idirana mety ho isan'ny olona, efa voafidy PJSIP (Protocol sokafy SIP) ho an'ny fitantanana ny session ho an'ny mpampiasa. Ity protocol ity dia be mpitia ao ny fiaraha-monina avy amin'ny telefaona sy tsy mitondra tahirin-kevitra - izany dia mpanelanelana. fotsiny mampifandray fantsom-pifandraisana Entre ireo mpampiasa mifanaraka. anefa am-boalohany SIP dia miorina amin'ny mpizara afovoany, manana ny mpamorona azy farany ny protocol hampahafantatra azy amin'ny OpenDHT ary avelao ny fitsinjaram-pahefana. Mahatonga nyn fampiharana tokana, ny protocol manamora ny fidirana telefaona nentim-paharazana (miaraka amin'ny kaonty SIP) ary ny fifandraisana maoderina (miaraka amin'ny kaontin'ny Ring) amin'ny fomba iray Mora ampiasaina.
GnuTLS: Mijanònahery ny fitantanana ny filaminana.
GnuTLS mitantana ny mari-pankasitrahana, lakile sy ny fomba encryption ho an'ny el feo, horonan-tsary ary lahatsoratra. El feo sy horonan-tsary mivezivezy fantsona azo antoka ary araho ny fenitra henjana SRTP (Protokol fitaterana azo antoka amin'ny fotoana tena izy). Este protokol mila noho ny teny miafina voaaro mifampiraharaha izy ireo araka ny fomba Deffie-Hellman. ny fifandraisana an-tsoratra mivezivezy na amin'ny fotoana tena izy manerana ny lakandrano SIP na avy amin'i OpenDHT rehefa ny mpandray hafatra tsy an-tserasera. La fiarovana ho an'ity de los fomba dia omen'ny fifanarahana TLS.
FFMPEG y LIBAV: Mitantana ny Audio sy horonan-tsary.
To be manao famindrana data ka rTSARA HO ary hazavana, Ring USA codecs famatrarana sy famotehana mandritra ny fitaterana. Ireo codecs dia tantanan'i Las trano famakiam-boky FFMPEG y LIBAV ho an'ny feo sy horonan-tsary.
Ireo kaody ampiasaina:
Raha alaina, azonao tsindriana mora foana ilay fizarana misintona (misintona) avy amin'ny developer ary miroso amin'ny fametrahana
Manaraka ny dingana mora voalaza hatreto ho an'ny sehatra tsirairay ao amin'ny fizarana fampianarana avy amin'ny developer:
Raha fintinina, Ring dia sehatry ny fifandraisana tsy misy GPL izay ahafahanao miantso feo na horonan-tsary ary koa mandefa hafatra an-tsoratra am-pilaminana. Mpandova ny tetikasa sflphone, ny Ring manolotra anay rafitra itsinjaram-pahefana peer to peer, hamorona tambajotra tsy miankina izay tsy misy angona angona ao anaty mpizara afovoany ary miaraka amin'ny antoka omen'ny encryption AES 128 amin'ny serasera multimedia rehetra.
ihany koa Ring dia mifanaraka amin'ny protokol toy ny SIP ampiasain'ny orinasa maro mivarotra Voip, ary koa miaraka amin'ny IAX2, mamela ny mifanentana amin'ny Asterisk. Ny mpampiasa tsirairay dia manana ny maha izy azy (RingID) misy litera 40 maromaro, izay hampiasaina hifandraisana amin'ireo mpifanerasera amintsika ary tsy maintsy zarainay na azontsika teo aloha, mba hahafahan'izy ireo manampy anay na manampy hafa.
Fampidirana miaraka amin'ny birao GNU / Linux azo atao ny manao azy amin'ny Fifandraisana GNOME (raha mbola misy RingID ny ankolafy hafa), ary avy amin'ny finday Android dia manolotra safidy maromaro hizarana ny mombamomba azy, na dia misy antsipiriany momba ny fanamorana fampiasana aza, izay azo antoka fa hanampy tsy ho ela. Ary anisan'ireo asa mandroso ny fanohanan'ny karazan-kaodim-peo sy horonan-tsary, tantara, fandraketana ny resaka, ankoatry ny mety fanamafisana mari-pankasitrahana na encryption.
tanteraka lampihazo miampita ary mbola any amin'ny fanjakana beta, Ring dia miteraka fahalianana lehibe ao anatiny ny mazoto nataon'i a sehatry ny fifandraisana Fiantsoana horonantsary ao anaty ny fiaraha-monina de Open Source sy rindrambaiko maimaim-poana.
Araka ny filazan'ny mpamolavola azy manokana, Ring «es fitaovana fifandraisana, fa izany tokoa zavatra mihoatra ny fitaovana iray. Miorina amin'ny fiarahamonina. An'io ho azy ary se Mampatanjaka amin'ny alalany«.
Amin'ny zavatra niainako manokana, izaho izao aorian'ny fametrahana Ring araka ny Fomba fanabeazana ho an'ny GNU / Linux mampiasa DEBIAN 8
Izany hoe, niroso tamin'ny fisintomana sy fametrahana ireo fonosana nakarina tamina terminal aho:
Avy eo, mba hanamarinana ny fananana ny fanavaozana farany, manao a havaozina ny repository sy ny fonosana efa napetraka (ao anatin'izany ny peratra):
Ary farany, ny fanatanterahana ny lozisialy sy ny fitsapana mivantana mitovy amin'izany hanamarinana ny azy fahombiazana, fitoniana, safidy ary fahaiza-miasa:
Ary farany, ilay fitsapana lehibe antso an-tsary sy resaka kely, miaraka amin'ny mpiara-miasa Espaniola tsara avy any amin'ny Nosy Tenerife, antsoina hoe Tybalt:
Raha ny hevitro manokana dia efa rindrambaiko matotra ampy hisolo ireo izay mampiasa Skype amin'ny Linux ao an-trano na tsy matihanina na sehatra asa. Ary azo antoka fa tsy ho ela dia ho tonga amin'io dingana io izy io! Ary mazava ho azy fa mitaky a bandwidth tsara na kalitaon'ny rohy ary fakan-tsary miaraka amin'ny mic mankasitraka horonan-tsary sy feo tsara kalitao miaraka amin'ilay mihaino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ring: Fanoloana ny Skype amin'ny GNU / Linux
Frank Yznardi Davila dia hoy izy:
Ary ho an'ny disto hafa?
Valiny tamin'i Frank Yznardi Davila
Mauricio Gómez dia hoy izy:
Izany dia miankina amin'ny fizarana. Ao amin'ny Arch ianao dia afaka mahita izany ao amin'ny AUR. Raha tsy izany dia heveriko fa tsy maintsy apetrakao avy amin'ny kaody loharano, izay tsy dia sarotra koa izany.
Valiny tamin'i Mauricio Gómez
Mandehana mankany amin'ny pejy ofisialin'ny tetik'asa, misy trano fitahirizam-bola ho an'ny fizarana maro na ireo rafitry ny fonosana lehibe.
Manana moto g miaraka amin'i KitKat aho ary tsy mandeha izy, manantona, manantena aho fa hitombo hatrany. Peratra
Tsara, tsy nanana hevitra aho misaotra lahatsoratra tsara.
Amin'izao fotoana izao dia ho an'ny solosaina Gnome ihany izany, sa tsy izany?
Fanadihadiana tsara momba an'io safidy maimaim-poana amin'ny Skype io izay amin'ny lafiny fampiharana amin'ny alàlan'ny videoconferencing, fiainana manokana, izay avy any Microsoft ny Skype ary indrindra koa amin'ny raharahan'ny Linux, izay lany andro lehibe indrindra. Tsy isalasalana fa, izay rehetra manome lanja ny fiainana manokana, mamaky ny lahatsoratra mahafinaritra anao, dia tokony hanandrana azy farafaharatsiny. Asa tsara, injeniera josé Johan Albert
Izy io dia miasa amin'ny Distros isan-karazany, fa amin'izao kosa, DEBIAN, Ubuntu, ary Fedora ihany.
Raha ny fahitana azy dia ho an'ny gnome ihany io, fa tokony hosedraina amin'ny tontolo hafa!
Ary tsara raha andramana azy rehefa tena milamina sy manana azy io.
Tsy mety amiko io any Mint Rosa miaraka amin'i KDE 🙂
Izy io dia miasa ho ahy ao amin'ny Mint Rafaela miaraka amin'i Xfce, na dia tsy misy kisary ao anaty fitoeran'ny bara fanombohana aza, saingy eo izy, mihazakazaka ao aoriana.
Hevitra iray fotsiny: raha tsy mifanerasera amin'ny tamba-jotra Skype ianao dia tsy ho mpisolo toerana eo amin'ny sehatry ny asa mihitsy.
Amin'ny asako, ny fifandraisana rehetra dia ataon'ny Skype, ary heveriko fa tsy hijanona amin'ny fampiasana zavatra mandeha tsara fotsiny izy ireo ary maimaim-poana, ary manana fanampiana ianao, ho an'ny zavatra iray izay fantatrao ny fandehany amin'ny ho avy, raha misy bibikely miseho, ary inona Ambonin'izany rehetra izany dia tsy misy olona hitarainanao raha misy ny zavatra mitranga.
txe dia hoy izy:
Fanohanana tolotra Skype? TSIA. Na dia amin'ny serivisy fandoavam-bola aza, raha tsy mahomby ianao, dia mankany amin'ny forum an'ny mpampiasa fotsiny izy ireo ary mijery raha sendra olona hafa manjo anao. Ary, raha manombana ny forum isika, ireo an'ny vondrom-piarahamonina openource dia nanome serivisy tsara kokoa hatrany. Ny maha loharano misokatra azy dia midika fa olona maro kokoa no afaka manome vahaolana raha misy tsy fahombiazana. Ireo teknisiana mpampihatra fananan-tany dia mifantoka loatra amin'ny fitazonana ny mpampiasa tsy hahalala ny ao anatiny na amin'ny firaketana ny rindrambaiko ahafahan'izy ireo mamoaka ny hevitry ny «fenitra», ohatra: IE. 😛
Mamaly an'i txe
Ary toa hitako ihany koa fa ny rindrambaiko maimaimpoana tsara indrindra dia ireo izay miseho ho toy ny tetikasa samirery, fa tsy ireo izay miseho ho "mpisolo", miaraka amin'ny fanaon'ny olona izay tsy azonao hifaninana, afa-tsy ny maningana, toa ny Firefox izay tamin'izany fotoana izany naharesy ny IE izy io, saingy satria potika ny IE.
Raha mamaha ny serasera VOIP izy raha tsy mitaky mpizara afovoany na manitatra ny protokolon'ny peer-to-peer, dia tetikasa ho azy irery izany. Na izany na tsy izany dia tsy azo sokajiana amin'izany sokajy izany i Skype.
Ny teny hoe "Mpisolo toerana" dia napetrako, tsy midika izany fa noforonin'izy ireo ho "Mpisolo" an'ny Skype.
Na izany aza, ny zavatra lazainao dia manana lanja sy lojika, fa tsy voatery voafaritra amin'ny mety fampiasana. Raha mifanaraka amin'ny fotodrafitrasa SIP sy VoIP izy io, ny Skype sy ny Ring dia afaka mifampiraharaha amin'ny mpanjifa miantso horonantsary eo ambanin'ny sehatra tsy miankina malalaka sy tompony ampifandraisin'ny Internet.
Mmhh… Novakiako ihany koa ny hevitra izay heveriko fa valio. Saingy, raha ny fahalalako azy eo amin'ny haavo teknikan'ny "tsotra" dia toa hitako fa mampiasa ny protokolony manokana azy i Skipe. Mino aho fa nisy ny fanandramana natao mba hanaovana fampiharana "mifanaraka" amin'ilay protokol Skipe, saingy tsy nahitam-bokany izany, indrindra satria M $ no nahazoana azy. Amin'ity lafiny ity, ekeko ny hevitra teo aloha momba ny mety fahombiazan'ny fampiharana telefaona iray: ny fampiharana ny Skipe, indrindra eo amin'ny tontolon'ny orinasa, dia matanjaka tokoa ka raha tsy mifanaraka amin'ilay protokolola ny fampiharana iray dia tsy hiorim-paka izany. Manana ohatra miaraka amin'i Ekiga izahay, izay na dia eo aza ny "fenitra" amin'ny ankamaroan'ny distro dia saika tsy misy mahalala izany eo amin'ny sehatry ny asa. Fantatro izany satria fantatro fa manana havana akaiky aho izay nilaza tamiko izany, satria ny fifandraisana amin'ny orinasa rehetra dia mampiasa Skipe, raha ny marina manery ny hafa hampiasa azy io amin'ny fifanarahana. Raha izaho manokana dia tsy tonga amiko akory ny mampiasa zavatra izay natsofok'i M $ ny orony, raha ny marina dia (hadinoko) ny famantarana Skipe izay zara raha nampiasaiko, ary talohan'ny fakana orinasa. Raha ny marina dia ny Güin2 fotsiny no ampiasako amin'ny filàna, ary mampiasa programa isan-karazany hanodinana ny tambajotra mpitsikilo izay napetrak'izy ireo niaraka tamin'izy ireo (xp-antispy, DisableWinTracking, sns). Tambajotra izay, amin'ny fahitana fotsiny ny fomba fiasan'ny sasany amin'ireo fandaharana ireo dia tsapantsika fa tsy sangisangy ny zavatra Big Brother. Ny W10 dia efa ny mololo farany, fa raha jerena fa amin'ny rafitra UEFI ny asan'ny tambajotra dia ampiharina amin'ny haavon'ny firmware.
Jose Luis Ruiz sary placeholder dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fampahalalana. Manana Ubuntu 14.04 aho.
Hotsapaiko izy io ary haparitako amin'ireo mpifanerasera amiko rehetra.
Valiny tamin'i Jose Luis Ruiz
Rehefa afaka andro vitsivitsy, dia naharay antso imbetsaka avy tamin'ny 1001 sasany aho, satria tsy nanana écouteur aho ary tamin'izay fotoana izay dia tsy afaka niteny aho, na dia tokony hihaino tamin'ny alàlan'ny mpandahateny aza aho ary tsy nahare na inona na inona rehefa naka ilay hook. Ary tsy nisy namaly ny hafatra nalefako handinika hoe iza io.
Mahazatra ny mahazo antso avy amin'ny 1001?
Tsy nitranga tamiko ny marina, ary nitady fampahalalana momba zavatra mitovy amin'ny azy manokana aho fa tsy misy! Tsy ho fantatro fa ...
Aleoko ireo rindranasa izay mampiasa fenitra mifandraika amin'ny fifandraisana toy ny FIrehio Hello na Jitsi izay misy dikanteny miaraka amin'ny webrtc ihany koa. Ny zava-dehibe dia ny fampiroboroboana ny fenitry ny serasera malalaka mba hahafahanao mampiasa izay programa tianao hifandraisana amin'ireo programa hafa.
Julius Saldivar dia hoy izy:
Raha mibahana PJSIP ity vahaolana ity dia maka ny SIP ho toy ny ivom-pifandraisany ary fenitra mifandraika amin'ny serasera ary VP8 ho an'ny horonantsary ary OPUS ho an'ny feo izay codec novolavolain'ny fahalalahana.
Ankehitriny dia esorina ny fanohanana skype ho an'ny linux ka fotoana mety izao hanandramana azy